यी राशि हुनेको आज भाग्य चम्किँदै ! हेर्नुहोस् आजको राशिफल (असार २९ गते आइतबार)::Leading Nepal News
आज वि.सं. २०७६ साल असार २९ गते आइतबार, तदनुसार ई. सं. २०१९ जुलाई १४ तारिख
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) आज कडा परिश्रम व्यर्थै खेर जान सक्छ । हाकिम, मातापिता वा विशिष्ट व्यक्तिसँग चित्त नबुझ्न सक्छ । बोलीमा संयमता अपनाउनु पर्छ किनकि भनेको कुराले विपरीत अर्थ दिनेछ । व्यापार र रोजगारीको क्षेत्रमा लगनशील र सक्रिय भएमा मात्र सफलता पाउनु हुनेछ । दाम्पत्य जीवन पनि निराशापूर्ण नै रहने छ ।
बृष (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) आज स्वास्थ्य सबल बन्नेछ । काम गर्न जाँगर चल्नेछ, आम्दानी बढ्न सक्छ । व्यवसायी र कर्मचारीका लागि आज कार्यक्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । सबैका लागि आम्दानीका दृष्टिले गज्जबको समय छ, धनसञ्चित हुनसक्दैन, भोगविलास र मनोरञ्जनका क्षेत्रमा खर्च बढ्न सक्छ । प्रेमको बन्धनमा बाँधिने बेला छ । दाम्पत्यसम्बन्ध सुखद रहनेछ ।
मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) आजको लामो समयदेखि रोकिएका कामहरू बन्ने छ । मिष्ठान्न भोजनको अवसर आउने छ, तर स्वास्थ्यमा सतर्क रहनु राम्रो हुन्छ । शारीरिक प्रतिस्पर्धा र तर्क, विवाद वा न्याय सम्पादनका सिलसिलामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ । मानसम्मान र प्रतिष्ठाको प्राप्ति हुनसक्छ । आर्थिक समस्या निराकरण गर्ने उपाय पत्ता लाग्नेछ ।
कर्कट (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो) आज व्यापारबाट लाभ मिल्नेछ भने आत्मबल बढ्ने समय छ । मानप्रतिष्ठा र सामाजिक मर्यादामा वृद्धि हुनेछ । इष्टमित्रले प्रशंसा गर्नेछन् । पारिवारिक सहयोग बढ्ने छ । ठूलाबडाले सहयोग गर्नेछन् । गृहस्थीहरूले छोराछोरीका माध्यमबाट सन्तोष प्राप्त गर्नेछन् । परीक्षा, प्रतिस्पर्द्धा र प्रतियोगितामा सफल हुने दिन छ ।
सिंह (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे) आज दिनभरि विविध समस्यामा रुमल्लिनु पर्ने छ। शरीरमा स्फूर्ति र उमङ्गको कमी हुनेछ । प्रेमसम्बन्धमा विश्वासको कमी देखिएला । आज प्रतिस्पर्धा र प्रतियोगिता भिड्नेले अलि मिहिनेत गर्नुपर्ने समय छ । छर–छिमेकमा असमझदारी बढ्ने सम्भावना छ । तर आज बेलुकादेखि दार्शनिक वा बौद्धिक क्षेत्रमा दिलचस्पी बढ्ने छ ।
कन्या (टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो) आज दिनभर सक्रिय रहनुहोला । व्यापारमा सोचेको फाइदा हुने दिन छ । आम्दानीमा बढोत्तरी हुनेछ । झैझगडा र विवादमा विजयी बन्नु हुनेछ । बन्धुबान्धव, साथीभाइ र मित्रवर्गबाट उत्कृष्ट सहयोगको आशा गर्न सकिन्छ । छात्रछात्राले प्रतियोगिता र प्रतिस्पर्द्धाका माध्यमबाट प्रतिष्ठा बढाउने समय हो । सबैको पारिवारिक जीवन सन्तोषप्रद रहने छ ।
तुला (र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते) आज बोलीको प्रभाव बढ्नेछ भने आफन्तले प्रशंसा गर्नेछन् । व्यापारमा राम्रो छ । आर्थिक लगानी बढाउन अनुकूल छ । प्रशंसकहरू बढ्नेछन् । सहयोगीहरूले काममा साथ दिनेछन् । विगतको श्रमबाट प्रशस्त धन लाभ हुनेछ । रोकिएका काम सम्पादन हुनेछन् । विद्यार्थीहरूका लागि पठन–पाठनमा प्रगति हुनेछ ।
बृश्चिक (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु) आज व्यापार र रोजगारीका क्षेत्रमा लाभ मिल्नेछ । प्रतिष्ठित काम गर्ने मौका छ । आत्मविश्वास बढ्नेछ । विशिष्ट व्यक्तित्वसँग भेटघाट हुनेछ । नयाँ कामको लागि नयाँ अवसर आउनेछ । मन त्यसैत्यसै फुरुङ्ग हुने समय छ । दैनिक कामकाज सजिलै सम्पन्न हुनेछन् । फुर्सद नमिले पनि राम्रो नतिजा हात पर्नेछ । छात्रछात्रा, परीक्षार्थी र प्रतियोगीले नयाँ ज्ञान पाउने समय हो ।
धनु (ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे) आज हरेक काममा अवरोध आउने समय हो, बेलाबेलामा अशान्ति र छटपटी हुनसक्छ तर अत्तालिइ हाल्नु पर्दैन । बन्दव्यापारमा बेफाइदा छैन । आत्मबल र हौसला नत्यागे सफलता पाउनु हुनेछ । नयाँ कामको वातावरण तयार हुनेछ । पारिवारिक जीवन सन्तोषप्रद रहने छ, घरखर्चमा बृद्धि हुनेछ । यात्राको योग छ ।
मकर (भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि) आज नोकरी गर्नेले मानसम्मान पाउने छन् । प्रशासनिक र राज्यपक्षबाट हुनुपर्ने काममा सफलता प्राप्त हुनेछ । पराक्रम र प्रसिद्धिमा वृद्धि हुनेछ । रमाइलो पारिवारिक जमघट हुनसक्छ । पठनपाठन र प्राज्ञिक क्षेत्रबाट लाभ लिन सकिने छ । धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रतर्फको काममा सहभागी बन्नु पर्ला ।
कुम्भ (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द) आज नवीन रोजगारीको सम्भावना छ । प्रतिस्पर्धीहरूमाथि विजय प्राप्त हुनेछ । धैर्यधारण गरी परिश्रम गर्ने दिन हो । स्वास्थ्यस्थिति राम्रो रहनेछ । पारिवारिक सुखसम्मृद्धिमा बृद्धि हुनेछ । काममा सोचेजस्तै सफलता मिल्नुका साथै उन्नति गर्ने अवसर प्राप्त हुने योग छ । व्यापार तथा व्यवसायमा सोचेजति लाभ पाइने छ ।
मीन (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) व्यापार फस्टाउने छ । सानो प्रयासले रोकिएको काम बन्नेछ । तर्कवितर्क र प्रतिस्पर्धामा विजयी भइने छ । दान, पुण्यका कार्यमा आकर्षण बढ्ने छ । पर्यटकीय स्थल, तीर्थ वा मन्दिरको भ्रमण हुनसक्छ । प्रेम र प्रणयप्रसङ्गका लागि पनि समय अनुकूल छ । सानो प्रयासले भाग्यबल बृद्धि गर्न सकिने दिन छ ।